Tag: SHABAAB | Sagal Radio Services
Al-Shabaab oo xalay weerar xooggan ku qaaday degmada Qoryooleey
Sagal Radio Services • News Report • February 17, 2019
Wararka naga soo gaaraya degmada Qoryooleey ee gobolka Sh/Hoose, ayaa sheegaya in xalay uu ka dhacay dagaal xooggan oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Al-Shabaab oo soo bandhigay Gaari Beebe oo ay ka qabsadeen Ciidanka xoogga dalka
Al-Shabaab ayaa soo bandhigay gaari kuwa gaashaaman oo loo yaqaano Beebaha oo ay isticmaalayeen Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, sida lagu baahiyay baraha Internet-ka ee taageera Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo sheegay in weerarkii Nairobi uu jawaab u ahaa Aqoonsiga Qudus ee Caasimadda Israel
Sagal Radio Services • News Report • January 17, 2019
Afhayeenka Guud ee Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday Hotel ku yaalla magaalada Nairobi uu jawaab u ahaa Tallaabadii Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu aqoonsaday inay Qudus tahay Caasimadda Israel.
Howlgal lagu dilay xubno Shabaab ah oo ka dhacay Jubada Hoose
Howlgal qorsheysan ayaa ciidamada Jubbaland waxaa ay ka fuliyeen Deegaanka Handaraaf ee Gobalka Jubada Hoose.
Sagal Radio Services • News Report • November 14, 2018
Maamulka degmada Beledxaawo ee Gobolka Gedo ayaa amar ka soo saaray xaasaska u dhaxa ragga ka tirsan Al-Shabaab iyo carruurtooda, iyagoo ku wargeliyay inay si degdeg uga baxaan gudaha degmada.
NISA oo sheegtay in xubin sare oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay duqeyn
Sagal Radio Services • News Report • October 27, 2018
Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa faah faahin ka bixiyay duqeyn Mareykanka ka fuliyay maalintii Khamiistii oo ku beegneyd 25 October deegaanka Kuunyo Barow ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Abu Cabdalla”Mid kamid ah raggii xukunka toogashada lagu fuliyay waxa uu ka tirsanaa sirdoonka Britain”
Sagal Radio Services • News Report • October 10, 2018
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in raggii ay shalay ku toogteen magaalada Jilib uu ka mid ahaa saraal ka tirsanaa sirdoonka wadanka Ingiriiska ee MI6.
Al-Shabaab oo soo bandhigay khasaaraha ka dhashay duqeyntii Saakow
Warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay sawirrada duqeyntii habeen hore ka dhacday degmada Saakow ee Gobolka Jubbada Dhexe.
Xarakada Al-Shabaab ayaa beenisay sheegasho ka soo yeertay maalmo ka hor Ciidamada Cirka ee Itoobiya, kaasoo ahaa inay duqeyn ku dishay 70 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Al-shabaab oo Guryo ku gubay deegaanka Caad ee G.Mudug
Wararka ka imanayaa degaanka Caad ee gobalka Mudug ayaa sheegaya in dagaalamayal ka tirsan Al-Shabaab ay dab qabadsiiyeen Guryo badan oo ku yaala degaankaasi.
Al-Shabaab oo sheegay inay weerareen Kolonyo ay la socdeen Saraakiil Caddaan ah duleedka Kismaayo
Sagal Radio Services • News Report • April 27, 2018
Al-Shabaab ayaa sheegtay inay weerar ku qaadeen kolonyo ay la socdeen Saraakiil Mareykan ah oo marayay duleedka magaalada Kismaayo, iyagoo ay wehliyeen Ciidamo Kenyan ah iyo kuwa Maamulka Jubbaland.
Dagaal culus oo ciidamo ka tirsan dowladda, AMISOM iyo Al-Shabaab ku dhex maray duleedka Baraawe
Sagal Radio Services • News Report • February 18, 2018
Wararka ka imaanaya degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo AMISOM oo dhinac ah iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ka dhacay duleedka degmadaas.
Abuu Muscab “Ma jirto Xero Tababar oo duqeyn loo geystay, waa war aan sal laheyn”
Sagal Radio Services • News Report • November 22, 2017
Al-Shabaab ayaa war ka soo saartay war ka soo baxay Taliska Mareykanka ee Africa iyo dowladda Soomaaliya, kaasoo sheegaya in la duqeeyay xero Tababar oo Al-Shabaab ku lahaayeen Gobolka Baay.
Ciidamada dowladda oo saaka dagaal kula wareegay deegaano ka tirsan Sh/Hoose
Sagal Radio Services • News Report • June 10, 2017
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa saaka duulaan ku qaaday deegaano hoos-taga degmada Afgooye iyo deegaanka Janaale, halkaasoo ay maamulayeen Kooxda Al-Shabaab.
Dilkii Axmed Godane ka dib Qaraxyadii Al Shabaab oo aad u yaraaday & Sababta oo la ogaaday (Akhri 3-Qodob) !!
Sagal Radio Services • News Report • October 10, 2014
Koox kasta marka ay weeyso hogaamiye ama Amiir kala haga waxaa si deg deg ah ugu yimaado awood yari iyo jahwareer dhanka abaabulka ah. Waxaa aad u yaraaday oo dhagaha Shacabka Soomaaliyeed ka sii guuraya Qaraxyadii iyo weeraradii ay fulin jireen maleeshiyaadka ururka Al Shabaab ka hor intaan laga qaarajin hogaamiyahoodii ama Amiirkoodii Axmed Cabdi Godane.
Sargaal ka tirsan Al-shabaab oo si dhuumaaleysi ah uga Dhoofay Garoonka Muqdisho
Warar Hoose ayaa sheegaya in Sargaal ka tirsan Xarakada Al-shabaab uu si qarsoodi ah uga dhoofay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan”Aadan Cadde”isaga iyo Dhowr ka tirsan Ilaaladiisa.
Sarkaal u hadlay Milateriga oo sheegay inay isku soo dhiibeen xubno ka tirsan Al-shbaaab
Sagal Radio Services • News Report • September 19, 2014
Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka ee gobolka Hiiraan Col. Cismaan Cabdi Muumin oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay inay isku soo dhiibeen xubno Al-shabaab ka tirsan.